Ukuhambisa kunye nokuHanjiswa | Uhlobo Rave
(A) Ngaba uhambisa umhlaba jikelele?
Ewe, sithumela emhlabeni jikelele. Zonke izinto ezithunyelwayo zithunyelwa ukusuka kwindawo yethu yokugcina izinto eNew York ngeUSPS kwaye iindleko zisekelwa kwidilesi yokuhanjiswa.
(B) Ndingayilindela nini into yam?
Zonke iodolo ziyenziwa kwaye zithunyelwa ngaphakathi kweeyure ezingama-24 (ngeCawa azifakwanga). Unokulindela ukuba iphakheji yakho ifike ngokusekelwe kukhetho lokuhambisa olukhethileyo njengoko kubonisiwe ngezantsi.
Ukuhambisa ngaphakathi eUnited States:
Sinikezela ukuhanjiswa simahla kweeodolo ngaphezulu kwe- $ 150 usebenzisa ukuthunyelwa komhlaba. Ixesha lokuhanjiswa kwehlabathi ziintsuku ezi-5 ukuya kwezi-7 zeShishini- iUS kuphela. Unokukhetha ukuThumela okuPhambili ukuze ufumane iodolo yakho ngeentsuku ezingama-2-3 zeShishini endaweni yoko (iindleko zisebenza).
Nazi iirhafu zethu zokuThumela izinto kuqala:
Izinto ezi-1 ukuya kwezi-2 - Imbalelwano ePhakamileyo yase-USPS (iiSuku ezi-2 zikaShishino )- $ 3
Izinto ezi-3 ukuya kwezi-5 - Imbalelwano ePhakamileyo yase-USPS (iiSuku ezi-2 zikaShishino )- $ 3
Izinto ezi-6 ukuya kwezi-9 - Imbalelwano ePhakamileyo yase-USPS (iiSuku ezi-2 zikaShishino )- $ 3
Ukuba ufuna iodolo yakho ukuba ifike kwakamsinya, sigqithisa kwi-Express mail yokuhanjiswa ngentsasa elandelayo.
I-Express mail: Nceda uqaphele i-odolo yakho kufuneka ibekwe ngaphambi kwe-10 am EST ukuze iodolo iphume kwangolo suku lunye. Ukuba i-odolo ibekwe emva kwexesha le-cutoff iya kuthumela ngosuku olulandelayo lweshishini. Ukutyikitya kuyafuneka ngexesha lokufumana.
Eyona nto iphambili kumazwe aphesheya (izinto ezi-1-3) $ 35.00
Eyona nto iphambili kwi-Intl (Ephakathi) (kwizinto ezi-4-6) ze- $ 45.00
Eyona nto iphambili kwi-Intl (Enkulu) (izinto ezingama-7- 9) $ 53.00
Eyona nto iphambili kwi-Intl (i-X-Enkulu) (izinto ezi-10+) $ 70.00
*Ukuthengiswa kuya kuthunyelwa ngeposi ngaphakathi kwe-24-48 iiyure zeshishini ukusuka kumhla woku-odolwa kwaye kuya kuthatha iintsuku ezingama-6 ukuya kwe-10 zokufika.
Ufuna into yakho kungekudala? Siyavuya ukunceda. Sithumele i-imeyile ukuze sikwazi ukulungiselela ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
Nceda uqaphele ukuba asinoxanduva lwalo naluphi na ulibaziso okanye umrhumo ngenxa yeNkcubeko. Nceda unxibelelane norhulumente wengingqi yakho okanye inkonzo yeposi ngolwazi oluthe kratya malunga namasiko kunye nemisebenzi enokusebenza kwilizwe lakho.
(C) Ndilandelela njani iodolo yam?
Nje ukuba i-odolo yakho ithunyelwe, i-imeyile iya kuthunyelwa kuwe equkethe ulwazi lokulandela umkhondo. Nceda uvumele iiyure ezingama-24-48 zeshishini kwiinkcukacha zakho zokuthumela ukuba uvuselele nge-USPS.
(D) Ndazi njani ukuba ifumene iodolo yam?
Emva kokuba ugqibe i-odolo yakho, i-imeyile yokuqinisekisa eneenkcukacha ze-odolo kunye nenombolo yokulandela umkhondo iya kuthunyelwa kwi-imeyile oyinikeyo ngexesha lokuphuma. Ukuba unemibuzo nceda unxibelelane neqela lethu lenkxaso kule shop@stylerave.com.
Ukuba ulindele impendulo evela kuthi, nceda ujonge kwifolda yakho yogaxekileyo. Njengoko i-imeyile yethu inokuphela apho okokuqala sikuthumela i-imeyile.
(E) Kuza kwenzeka ntoni ukuba i-odolo yam isele izisiwe?
Ukuba emva kokunxibelelana ne-USPS ngenombolo yakho yokulandela umkhondo usadinga uncedo malunga nokufumana iodolo yakho, zive ukhululekile ukufikelela kuthi shop@stylerave.com kwaye omnye wabameli bethu uyakukuvuyela ukukunceda.
Nceda uqaphele, asinoxanduva lokuyalela elahlekileyo yinkampani yokuhambisa, ii-adilesi ezingalunganga, okanye iiphakheji ezingafunwanga / ezibuyisiweyo.
Cofa ukuze uqhubeke ngokuthenga kwiVenkile yeTayile yeVenkile.